Ibhulogi yokuthengisa -
Bheka Ukulinganisa Nokubhalisa
Ngena ngemvume Zama i-CRM mahhala
Thola Ulwazi Lokungaphakathi KuMikhankaso Yokuthengisa Nemakethe Ephumelelayo
Awu, hhayi izinto ezijwayelekile zokuthengisa zedijithali.
I-CompanyHub iwina i-CRM ye-G2Crowd High Performer CRM ye-Spring 2018
Mashi 29, 2018 by admin·0 Comment
Ukunqoba okukhulu kweqembu CompanyHub CRM !!! Kulolu suku i-G2Crowd yamemezela uhlu lwayo oluphezulu lwe-Performer Spring 2018 futhi siyajabula kakhulu ukumemezela ukuthi I-CompanyHub CRM ifakwe esikhundleni se-13th ku-Top 20 CRM Isigaba sesofthiwe esekelwe ukwaneliseka komsebenzisi. Qhubeka ukufunda
InkampaniHub - Uhambo lwethu seluqalile.
Saqala kanjani lokhu: -
Lo mbono wasisitshela ku-2015 lapho sathola ukuthi amaqembu okudayisa akakwazanga ukwenza ngokwezifiso i-CRM yawo ngokwabo futhi adingeka ukuxhumana neqembu lokusekela lomhlinzeki we-CRM ukuze afune umphumela oyifunayo. Qhubeka ukufunda
I-Insider Revealed Amacebo Wokukhangisa we-Baahubali 2 - Ayenjenge-Awesome njenge-Movie
July 24, 2017 by admin·0 Comment
I-Baahubali 2 yakha umlando. Yaba ifilimu yokuqala yamaNdiya ukuqoqa> i-500 crore (cishe i-$ 100 million) ezinsukwini ze-3! Qhubeka ukufunda
Indlela i-Airtel ikhonjulise ngayo Izinkinga zeKhasimende futhi ifeze ukukhula kwe-300% yenyanga kanye ne-30 nje yesibili i-Pitch
July 22, 2017 by admin·0 Comment
Ukuqonda kahle amakhasimende akho kungaholela ekukhuleni okukhulu
Kwakuyi-2012- Ngo-Apr, ngenkathi i-Airtel, i-telecom giant ivukile emahlathini nokukhala kwamakhasimende. Babengabaholi bezimakethe emibuthanweni eminingi ye-telecom ye-Indian elandelwa eduze yiVodafone. Qhubeka ukufunda
InkampaniHub CRM i-Rising Star ye-2017
June 27, 2017 by admin·0 Comment
Sizizwa sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-CompanyHub ihlonishwe ngayo Ukwaziswa Omsebenzisi OmkhuluFuthi iI-Rising Star ye-2017 umklomelo kusigaba se-CRM sesofthiwe nge-platform ye-B2B yokubuyekezwa kwesofthiwe, i-FinancesOnline. Qhubeka ukufunda
Indlela Yokubhala I-Personal Sales Imeyili - Ngezibonelo ze-15 +
Uma ufana nabantu abaningi bokuthengisa, i-imeyili yakho "yokuthengisa" ingase ibheke into enjengale:
Thola Imibono Engenayo Yokuthuthukisa Ukuthengisa Kwakho
Ungathola eziningi zokudala ukuthengisa nokukhangisa imibono yebhizinisi lakho, ngokwazi amasu ezinye izinkampani.
Thola ulwazi oluthile ngamanye amacebo okudayisa nokuthengisa okuhle okuhle (nah, hhayi izinto ezijwayelekile zokuthengisa zedijithali) zezinye izinkampani
Ukuphathwa koPhambili Iphayiphu yokuthengisa Ukuzenzakalela kwe-imeyili Umbiko Wokuthengisa I-CRM eyenziwe ngokwezifiso Amanani we-CRM Inqubomgomo yobumfihloImigomo Yokusebenzisa